Ambongadiny SUS440C fikolokoloana biby fiompy mihety volo mihintsy miampy hetsi-panoherana 40 degre | Icool
SUS440C hetsi-panoherana matihanina miompana amin'ny hety miolakolaka 40 degre
Modely ： IC-70C
Endri-javatra: Hety miolakolaka mihoampampana
Fitaovana: Stainless vy JP SUS440C
● Mpanamboatra hety volo sy henan'omby izahay. Ny orinasanay dia niorina tamin'ny taona 2000 ary manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny famokarana hety. Manana traikefa manan-karena amin'ny famokarana angady hety mahery isika.
● Ny haben'ity fanety miolakolaka mahery ity dia 7 santimetatra ary ny halavany dia antonony, mety ho an'ny mpitaiza biby fiompy lahy sy vavy. Mavesatra ny hety, ary tsy misy tsindry raha ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra.
● Ny hety dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony Japoney, izay manana hamafin'ny hafanana sy mateza. Raha te hividy hety miolakolaka mateza sy maranitra ianao dia ity hety ity no safidinao tsara indrindra.
● Ny tombony azon'ity hety ity dia ny fehilehiny be loatra sy ny tahony ergonomika. Ny famolahana 40 degre dia mety hahatonga ny hety hifanaraka amin'ny ampahan'ny biby fiompy izay mila hotaingoina tanteraka. Mety ho an'ny mpikarakara ny biby ny manamboatra fomba tonga lafatra ho an'ny biby fiompy. Ny fihazonana ergonomika dia afaka mifanaraka tanteraka amin'ny rantsan-tànana nefa tsy miteraka fahasimban'ny rantsantanana sy ny tanany. Na dia mampiasa hety mandritra ny fotoana lava aza ianao dia tsy hahatsapa fihenjanana.
● Ny lelan'ny hety dia raikitra amin'ny visy avo lenta, izay mateza ary mora ovaina. Namboarina tamin'ny toerana mety alohan'ny handaozana ny ozinina. Aza afindra mora foana ny visy, izay mety hanimba ny hety.
Teo aloha: Andiam-bolo vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana vita amin'ny tànana miolakolaka
Manaraka: SUS440C fikolokoloana fiompiana matihanina hety tena miolakolaka